တစ်နေ့ပြီး တစ်နေ့ (၁၄) Day by Day (14) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Literature/Books » တစ်နေ့ပြီး တစ်နေ့ (၁၄) Day by Day (14)	17
တစ်နေ့ပြီး တစ်နေ့ (၁၄) Day by Day (14)
Posted by Ma Ma on Jun 27, 2015 in Literature/Books, My Dear Diary | 17 comments
မိုးအေးအေးနဲ့ ကွေးလို့ကောင်းတဲ့ရာသီမို့ တက်တက်ကြွကြွမရှိပဲ ပျင်းရိလေးတွဲ့နေမိတယ်။
ဂျူလိုင်လအတွက် ကာတွန်းတွေကို ဇွန်လဆန်းကတည်းက ရေးမယ်လို့ တွေးထားခဲ့ပေမယ့်….
မူလအပျင်းဓာတ်ခံကို သဘာဝကြီးကပါ ပံ့ပိုးပေးလိုက်တော့ လကုန်ခါနီးမှပဲ မဖြစ်မနေ ရေးရပါတော့တယ်။ အခုရေးမယ့် တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ (၁၄)ကတော့ ဂျူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ကနေ ၃၁ ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါတယ်။
အရာရာတိုင်းမှာ မျက်စိနဲ့ သေသေချာချာကြည့် နားစိုက်ထောင်ပြီး စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့ လိုကြောင်း အသိပေးခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
စိတ်ပျိုတော့ ကိုယ်နု လို့ သဘောပေါက်မိပါတယ်။
အနာဂတ်ဆိုတာ ကိုယ်မပိုင်သေးတဲ့ မရေရာမှုသာဖြစ်တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မရနိုင်တော့တဲ့ အတိတ်ကို လွမ်းနေလို့ကလည်း အပိုပဲပေ့ါ။
လက်ရှိအချိန်သည်သာ အကောင်းဆုံးအချိန်။ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ဒေသကောလိပ်မြန်မာစာက တိုင်းရင်းသားစကားပုံတွေမှာ သင်ခဲ့ရတဲ့…
သူ့ကျေးဇူးကို မှတ်ထားပါ။ ကိုယ့်ကျေးဇူးကို မေ့ပစ်ပါ ဆိုတာကို သတိရမိသွားတယ်။ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ခုလတ်တလောအခြေအနေအရ ကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့် မဲတစ်ပြားရဲ့ တန်ဖိုးကိုလည်း သိကြ အလေးထားကြဖို့….. ရာသီစာလေး ထည့်ကျွေးချင်ပါတယ်။ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
နေရာမရွေး အင်မတန်အသုံးဝင်တဲ့ အကျိုးများတဲ့ အမှာစကားပါပဲ။
လွယ်လွယ်ကတိပေးပြီး အလုပ်မဖြစ်ရင် နောက်လာမည့်ကိစ္စတွေအတွက် ယုံကြည်မှုအားနည်းသွားတတ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ကာတွန်းဆရာရဲ့ အာဘော်ဖြစ်မယ်။ ထောက်ခံပါတယ်။
အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကို သိရမယ်လို့ ဆိုလိုချင်ဟန်တူပါတယ်။
ရွာထဲက အမျိုးတွေကို ကြုံတုန်းပြောရမယ်ဆိုရင်……
ကျမလည်း ကာတွန်းထဲကပုံလိုပဲ ဧည့်သည်ကောင်း ပီသပါတယ်လို့။ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
သီတဂူဆရာတော်ကြီးကတော့ ပါးစပ်မှာ ခဲဖျက်မပါဘူး တဲ့။
နည်းနည်းပြောရမယ့်နေရာမှာ မပြောပဲနေ တဲ့။ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Slow & Steady ပေ့ါ။
ပုံမှာတော့ ပြောင်းပြန်ပြထားတော့ ဆရာအော်ပီကျယ်က ထပ်ချဲ့တွေးနိုင်ကြောင်း ပြောချင်တာ ထင်ပါရဲ့။ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
မြန်မာစကားပုံမှာ အလှမ်းကျယ် အလယ်လပ် လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ခုခေတ်အတွေးနဲ့ ကာတွန်းပုံကိုကြည့်ပြီး အောက်ကတစ်ယောက်က ဒေါက်ဖြုတ်လိုက်မှာကိုလည်း စိုးရိမ်ကြောက်လန့်ရမယ့်ပုံပဲ။ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ရီစရာတွေးမိတာ ဒေါသနဲ့ အိပ်ရာမ၀င်နဲ့ဆိုတော့
လောဘနဲ့ မောဟနဲ့ အိပ်ရာဝင်ရမလို…. အိပ်စက်အနားယူတော့မယ်ဆိုရင် တွေးစရာတွေအားလုံး လွှတ်ချထားပြီး
ဘာဝနာတစ်ခုခု ရှု့မှတ်တဲ့အကျင့်လုပ်ပေးရင် ကောင်းသောအိပ်စက်ခြင်းနဲ့ အိပ်စက်ရလို့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှကြုံတွေ့နေရတဲ့ လူ့ဘ၀အမောတွေကို ပြေပျောက်စေနိုင်မယ်။ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ပြောရမယ်ဆိုရင် တစ်သက်လုံး တွေးမြင်ယူဆလာတာတွေကို စွန့်လွှတ်ပြီး ဆန်းသစ်ပြောင်းလဲလာဖို့ဆိုတာ…………….
ဆိုသလို မလွယ်ကူလှပါဘူး။ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(မသိတာကို မသိဘူး မပြောပဲ) တချိန်ချိန်မှာ ကိုယ်ဘာမှ ရှင်းမပြရပါပဲ နားလည်လို့လာမယ်၊…….. ဆိုတဲ့ စိုင်းထီးဆိုင်ဆိုထားတဲ့ သီချင်းခေါင်းစဉ်ကို သိချင်ပါတယ်။ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
တစ်ခါတလေနိုင်မယ်၊ တစ်ခါတလေ သင်ခန်းစာရမယ် တဲ့။ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
အောင်မြင်မှုဟာ လုံ့လ၀ီရိယ ရှိသူအတွက်သာ လို့ သဘောပေါက်မိပါတယ်။
အမှန်တရားကို ယထာဘူတကျကျ သိနိုင်ဖို့ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲတွေ လွတ်ချလိုက်ပါ။
မြန်မာစကားမှာတော့ ပုဂ္ဂိုလ် ခင်ရင် လူကို မင်တယ် လို့ ဆိုထားသကိုးးးး +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ပြောရမယ်ဆို ဒေါသဆိုတာမျိုးကလည်း အရှိန်အဟုန်နဲ့လာတာဆိုတော့ကာ…….
ဒေါသ တစ်မိနစ်အတွက် ပျော်ရွှင်မှုက စက္ကန့် ၆၀ မဟုတ်ပဲ မိနစ်၆၀ လောက်လည်း ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ဇန်န၀ါရီလ ၂၇ ရက်နေ့ ကာတွန်းမှာ နားထောင်ဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့သူတွေကို မပြောပါနဲ့ တဲ့။ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ယောက္ခမဆိုတာ တစ်ချိန်တုန်းက သားမက်ပါပဲ ဆိုတဲ့ မြန်မာရုပ်ရှင်ကားကို သတိရမိတယ်။ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
မမှားသောရှေ့နေ မသေသော ဆေးသမား လို့ ဆိုရိုးရှိတယ် မဟုတ်လား။
မှားပြီးရင်း မှားမနေဖို့တော့ လိုတာပေ့ါ။ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
လူဆိုတာ ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေးကြတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်မဖတ်မိကြဘူးလို့တော့ ထင်မိတယ်။ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ရောက်တဲ့အရပ်မှာ ပျော်အောင်နေ၊ တွေ့တဲ့လူနဲ့ သင့်အောင်ပေါင်း ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားပုံရဲ့ ခေတ်သစ်ဗားရှင်းလို့ ပြောချင်မိတယ်။ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ငှက်ပျောသီးခွာစားနည်းကျူရှင် …. ဆိုတဲ့ကာတွန်းကို သတိရမိတယ်။ တကယ့်လက်တွေ့လောကမှာတော့ ကျွမ်းကျင်ရာ လိမ္မာ ပါပဲ။
အတွေ့အကြုံ လုပ်သက်နဲ့ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဟာ ကျောင်းပညာဘွဲ့ရတစ်ယောက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်မရအောင် ကွာခြားတာတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းမှာ ငါဘွဲ့ရပဲဆိုတဲ့ ထင်တစ်လုံးနဲ့ ကိုယ့်ထက်လုပ်သက်ရင့်ပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့သူကို ပမာမခန့် မလုပ်မိဖို့လိုပါတယ်။
ကျောင်းပြီးလို့ နောက်ဆုံးနှစ်မှာ အမှတ်တရစာအုပ်လေးလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါ ဆရာ/မတွေက ဆုံးမစကားလေးတွေ ရေးပေးကြတယ်။
ဆရာမကြီးတစ်ယောက်က (နောက်ပိုင်းမှာ ပါချုပ်ဖြစ်သွားတယ်) လိုအပ်သောဆု မြတ်သောဆုများနဲ့ ပြည့်စုံနိုင်ပါစေ လို့ ရေးပေးဖူးတယ်။ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ကိုယ်တိုင်မစစ်ဆေး မကြည့်ရှု့ပဲ ပြောတိုင်းယုံရင်တော့ အချဉ်မိဖို့ချည်းသာပဲ ဖြစ်ပေတော့မပေ့ါ။ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
အချို့သောသူတွေက သူတပါးဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အပေါ် သင်ခန်းစာယူတတ်လို့ လက်တွေ့ဘ၀မှာ ထိခိုက်နစ်နာမှုနည်းရတယ်။
(ဒေါ်ကေဇီကတော့ သင်ခန်းစာယူတတ်တယ်လို့ ပြောဖူးတာပဲ။) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ပြန်မဖတ်ဖြစ်ကြဘူးဆိုတာ အခုကာတွန်းက သက်သေခံနေတယ်။ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကို နားမလည်ရင် ကိုယ့်ကိုပြန်ဒုက္ခပေးတတ်တယ်ပေ့ါ။ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
နှေးစေချင်လို့ကို ထိန်းချုပ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
မဖြစ်သင့်တာ တစ်ခုက ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ချုပ်မိမှာတစ်ခုပဲ။
ကိုယ့်အမြင်ကို ပြောရရင် အကောင်ကြီးကြီး အမြီးရှည်ရှည် ဆိုတာ ပိုလျှံတာမဟုတ်ပဲ
ပြည့်စုံကုံလုံတာ၊ စွမ်းအင်သြဇာပြည့်ဝတာ လို့။
အကောင်ကြီးဖို့လိုသလို အမြီးရှည်ဖို့လည်း လိုတာပဲကိုးးးးးး ဤတွင် ဂျူလိုင်လအတွက် ကာတွန်းဒဿနများ ပြီးဆုံးပါပြီ။
ဖတ်ရှု့အားပေးသူအပေါင်းကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါကြောင်းးးးးးးးးးးးးးးး About Ma Ma
ဦးကြောင်ကြီး says: .. ခိုနီမားမား
.. မျို ဖီဝါးလား
Ma Ma says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ချစ်မမ ရာ နောက်လ ဆို ကြိုးစားပြီး တစ်ပါတ် စီ ခွဲ တင်ပေးပါ။
ဖတ်ရတာ နဲနဲခြင်း ပိုပြီး ကောင်းလို့ပါ။
များလွန်းတော့ တစ်ပုံခြင်း ကြာကြာ မစဉ်းစားနိုင်ဘူး။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ပုံ ၃၁ ကို ကြိုးစားပြီး ရ အောင် တင်ပေးတာ ကိုလဲ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ :-))
(၁) ကလိုဘဲ ရွာထဲ မှာတော့ ကျွန်မတို့ မျက်လုံးနဲ့လဲ နားထောင် တယ်။
မျက်လုံး နဲ့လဲ စားတယ်။ မျက်လုံး နဲ့ လဲ ရီ ကြ တယ်။
(၃) က ယနေ့ တွေ ကို ထင်ဖြုန်း နေခဲ့တာ များနေတာ သိနေလဲ
(၄) ပုံထဲကြည့်ပြီး ဆရာအေပီကေ ကလဲ ရွာထဲ က ကြောင်ကြောင် ကို တယ် ထင်ရဲ့လို့ တွေးပြီး ရီ လိုက်ရတာ။
(၉) က တစ်ခါတစ်ခါတော့ မရဘူး မမ ရဲ့။ ကိုယ့်ဘေးကလူ ဘောင်းဘီဇစ် မဆွဲထားမိတာမျိုး။
(၂၅) က လိုချင်တာ မရခဲ့တာ ကံကောင်းတယ် က လက်ရှိ ဝဖြိုး တုတ်ခိုင် အဆီယစ် နေသော သူများ ကို တစ်ချိန်က တမ်းတမ်းစွဲ ခဲ့ သလို။
(၂၆) က (၁) နဲ့ ကွန်းဖလစ် ဖြစ်နေလား မသိ။ ဆရာကြီး ကို ကွန်ပလိမ့် လုပ်ကြပါ။
(၃၁) က အစိတ်သား ပိုနေတာလူတိုင်း အသိပါ။ ဖယ်ကြပါ။
Ma Ma says: ပျင်းပျင်းနဲ့ ပုံတွေချည်းပဲ တင်လိုက်မလို့။ နောက်လအတွက်တော့ ခွဲတင်လိုက်ပါ့မယ်။
မလတ်ရဲ့ မတူတဲ့အမြင်နဲ့ ခံစားချက်တွေကို သဘောကျတယ်။
ဒီပိုစ့်မှာ အဓိကကိုယ့်အာဘော်က ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်မဖတ်ဖြစ်ကြတာကို ပေးချင်တာ။
(ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီကာတွန်းတွေ ဖတ်ရင်းနဲ့မှ အတွေးပေါက်သွားလို့) ပြောရမယ်ဆိုရင် ကာတွန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ အပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေထည့်ထားတာလည်း……
ကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေအတွက် ရှေ့ပြေးနမိတ်လိုမျိုး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ဇီဇီခင်ဇော် says: ယူစရာရှိတာ ယူပြီး မှတ်စရာရှိတာ မှတ်သွားပါပြီ။
Ma Ma says: (ဒေါ်ကေဇီကတော့ သင်ခန်းစာယူတတ်တယ်လို့ ပြောဖူးတာပဲ။)
ဇီဇီကို ရန်စထားတာ စိတ်မဆိုးရဘူးနော်။ အခုကာတွန်းတွေထဲမှာ ၈ရက်နေ့ကာတွန်းဖြစ်တဲ့…
`ဧည့်သည်ကောင်းဟာ ဘယ်အချိန်ပြန်ရမယ်ဆိုတာကို သိတယ်` ဆိုတဲ့ကာတွန်းကိုဖတ်ပြီး ကျောက်စ်မောင်နှံပြန်လာမယ်ဆိုတာကို သတိရမိသွားတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကျနော် ဟမ်ဘာဂါ ဘာ ချစ်မ
aye.kk says: မမရေ
Ma Ma says: အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မအေးရေ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဟာသ ဆိုတာ ရှင်းပြရင် မရီရ ဘူးဆိုတာအကြိုက်ဆုံးဘဲ
Ma Ma says: ကျမလည်း အဲဒီကာတွန်းကို သဘောကျတယ်။
ကဗျာရေးတဲ့သူငယ်ချင်းက သူ့ကဗျာကို သဘောမပေါက်ဘူး၊ နားမလည်ဘူးပြောရင် ရှင်းပြခိုင်းရင် အားကြီးစိတ်ဆိုးတာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12177
Alinsett @ Maung Thura says: ယူတတ်ရင် ယူတတ်သလောက် ရစေတဲ့ပိုစ့်ပဲ
Ma Ma says: လွယ်ကူရှင်းလင်းပြီး ပြောင်မြောက်တဲ့ကာတွန်းတွေက ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျကို ထိရောက်စွာ ပေးနိုင်လို့ အဲဒီကာတွန်းပြက္ခဒိန်ကို တစ်အုပ်လုံး တင်ဖြစ်သွားတာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .တခါတရံ လိုချင်တာမရခဲ့တာ ကံကောင်းတယ်….ဆိုတာကိုသရုပ်ဖေါ်ထားတာကြည့်တော့
.ကျုပ်တို့ကျောင်းနေဖက်တွေကြီးမှပြန်ဆုံတော့ ၀တုတ်ဘကီးတွေဖြစ်နေတာကြည့်ပြီးးအချင်းချင်း
.အချို့မေးခွန်းတွေမှာအဖြေမရှိဘူးတဲ့….ဆိုတော့ ကြက်ဥနဲ့ကြက်မ ဘယ်ကစ ဆိုတာသတိရသွားတယ်
Ma Ma says: ကျောင်းတုန်းက ကာတွန်းဘောက်စ်မှာ `ဒါတို့ကျောင်းက ရွက်ဝါ လေ` လို့ ပြောတဲ့ ကာတွန်း မှတ်မိလား။ ကိုယ်ကလည်း အဲဒီတုန်းကတည်းက ရွက်ဝါဖြစ်ခဲ့တာ ဆိုတော့ အဲဒီကာတွန်းကို မှတ်မိနေတော့တာ။
အောင် မိုးသူ says: ကားတွန်းလေးတွေ သဘောကျမိတယ်။
Ma Ma says: သဘောကျတယ်ဆိုလို့ သဘောကျတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.